Moments Neshamwari 7
Mukutaura kwe clairvoyance uye zvemashiripiti zvinhu, shamwari inobvunza: Ichokwadi here kuti munhu aone munguva yemberi?
Ehe. Zvinogoneka. Nguva yakakamurwa nezvapfuura, zvazvino uye nezveramangwana. Isu tinotarisa mune yakapfuura, apo isu tinorangarira chinhu nekuona mumaziso emukati medu izvo zvaitika. Uku kuona munguva dzapfuura munhu wese anogona kuita, asi havasi vese munhu anogona kuona mune ramangwana, nekuti vashoma vanoshandisa ruzivo rwekare zvinehungwaru kuti vaone mune ramangwana. Kana mumwe akatora zvese zvinhu uye akatakura chiitiko chekare achifunga nezve ruzivo rwake zvaizomugonesa kufanotaura zvimwe zviitiko zvenguva yemberi, nekuti kunyangwe ramangwana nderokuparadzanisa nguva isati yasvika, chokwadi, zviito zvekare , fashoni, sarudza, kudzikamisa ramangwana, uye, saka, kana mumwe achigona, segirazi, kuratidza ruzivo rwepamberi, anogona kufanotaura zviitiko zvenguva yemberi.
Hazvibviri here kuti munhu aone zviitiko chaiyo zvekare uye zviitiko sezvavanenge vari mune ramangwana zvakajeka uye zvakajeka sezvaanoona zviriko?
Zvinogoneka, uye vazhinji vakazviita. Kuita izvi unoshandisa icho chinonzi clairvoyance, kunyatsoona, kana kuona kwechipiri. Kuti uone clairvoyantly, seti yechipiri yemagetsi kana pfungwa yemukati yekuona inoshandiswa. Iro ziso rinogona kushandiswa, asi izvo zvisina kukosha kuti clairvoyance, nekuti icho chimiro chemukati chinoshanda kuburikidza nepfungwa yekuona chingatamisa chiito chayo kubva muziso kuenda kune chimwe nhengo kana chikamu chemuviri. Zvinhu zvinogona kuzoonekwa, semuenzaniso, kubva kumapipi eminwe kana solar plexus. Iko iyo clairvoyant inotarisa pane yatinoti zvinhu zviri kure zvakapfuura kana pane zviitiko zvichazouya, chikamu chemuviri kubva pane izvi chinoitwa kazhinji chinowanzova munhava iri pamusoro pemaseru emaziso. Ikoko sepanenge pane panera remhepo panoratidzwa kana chinhu chinowanzoonekwa chinowanzoonekwa zvakajeka sekunge kuti clairvoyant yaive panzvimbo iyoyo chaiyo. Zvese izvo zvinodikanwa kuitira kuti kutaurirana zvinoonekwa, ndiwo hunyanzvi hwekutaura.
Ndezvipi zvinoita kuti munhu aone zvakajeka kana kuona kwakadaro kuchipikisa zvose zvatinoona?
Kuona kwakadaro hakuzi mukati mezvinoitika kune vese. Izvo zviri mukati mezvinoitika zvevamwe. Vazhinji veavo vasina kuve neruzivo vanokasira kupupurira kweavo vanga vanayo. Izvo hazvipikiswe nemitemo yechisikigo, nekuti ndeyezvisikirwo, uye inogoneka kune avo vane linga sharira, astral muviri, haina kunyanyoomerera zvakanyanya mukati memasero ayo epanyama. Ngatimbofunga nezve zvinhu zvatinoona, uye nezvatinoona izvo zvinhu kuburikidza. Kuona pachako chinhu chakavanzika, asi izvo zvinhu zvine chekuita nazvo isu hatitarise chakavanzika. Nekudaro, isu tine maziso enyama ayo atinotarisa mumhepo uye imomo tinoona zvinhu zvepanyama. Isu tinofunga izvi zvakasarudzika, uye ndizvo zvazviri. Ngatimbofungai nezvehumambo hwakasiyana uhwo hunogona kuoneka. Ngatitii isu taive muvhu semakonye kana zvipembenene; isu tinofanira kunge tiine pfungwa yekuona, asi masimba edu anga ari mashoma. Nhengo dzatinoziva semaziso dzaisakwanisa kushandiswa kuona nzvimbo refu, uye kuona kwemuviri kwaizogumira munzvimbo pfupi kwazvo. Pamberi imwe nhanho uye fungidzira kuti isu tanga tiri hove. Nzvimbo iyo yataigona kuona ipapo mumvura yaigona kunge iri huru uye maziso aizoverengerwa kunyoresa kutinhira kwechiedza kunouya nepakati pemvura. Sezvo sehove, zvakadaro, tinofanira kuramba mukana wekuona neimwe nzira kupfuura kuburikidza nemvura kana, kutaura idi, kuti kwaive nechinhu chakadai semhepo. Kana perchance isu takabvisa mhino dzedu uye tobva tarisa maziso edu pamusoro pemvura mumhepo saka isu taisakwanisa kugona kufema, uye maziso haaigona kushomeka nekuti kunze kwechinhu chavo. Semhuka kana vanhu venyama isu tiri nhanho imwe pamberi pehove. Isu tinoona kuburikidza nemudenga medu uye tinokwanisa kuona zvinhu kuburikidza nemaziso ari kure zvakanyanya kupfuura kuburikidza nemvura. Asi isu tinoziva kuti matenga edu, kuva akakora uye akadzimara, anodzikamisa kuona kwedu. Wese munhu anoziva kuti mumhepo dzemuchadenga reChicago, Cleveland nePittsburg zvinhu zvinogona kuoneka kure nemamirimita mashoma chete. Mumaguta umo zvese zvakajeka, munhu anogona kuona makumi matatu kana makumi mana emakiromita, asi kubva kumakomo eArizona neColorado kure kwemazana emakiromita mamaira anogona kuvezwa, uye zvese izvi nemeso enyama. Seizvo munhu angaona zvakajeka nekukwira munzvimbo dzakajeka, saka mumwe anogona kuona zvakapetana nekusimuka kuenda mune chimwe chinhu chakakwira kupfuura mweya. Chinhu chinoshandiswa neclairvoyant kuona mukati mairi ether. Kune clairvoyant anoona mune ether pfungwa yedu yehure inorasikirwa nehukuru hwayo senge zano rekuti kureba kwehonye kana hove ingarasikirwa nechinoreva kune anogara munzvimbo dzakakwirira, ane ziso rakasimba anogona kuona zvinhu zvisingaonekwe kune avo vanogara. mune yakadzika strata pamapani.
Ndezvipi nhengo dzinoshandiswa mu-clairvoyance, uye zvakaratidzwa sei zvinobva kune zvinhu zviri pedo kune avo vari kure, uye kubva kune vanozivikanwa vanoonekwa kune vasingazivikanwi vasingaoneki?
Chero chero nhengo mumuviri inogona kushandisirwa clairvoyant zvinangwa, asi iwo mitezo kana mitezo yemuviri zvimisikidzo kana nehungwaru inoshandiswa neclairvoyant ndiyo nzvimbo inoonekwa pane cortex yeuropi, mhosho dzekutangisa, opicami thalami, uye iyo muviri wechipisi. Zvinhu zvepedyo zvezvinhu zvinoonekwa nemafungu emagetsi emuchadiso pane iro ziso, rino shandura aya mawere echiedza kana kutinhira kuenda kune optic nerve. Idzi nhare dzinotakurwa pamwe chete neye optic turakiti. Dzimwe dzeidzi dzinoendeswa kune opicami thalami, nepo dzimwe dzakakandirwa pauropi cortex. Izvi zvinoratidzwa mune yekumberi sinus, iyo iri pikicha yemifananidzo yepfungwa. Iyo pituitary muviri ndiyo nhengo kuburikidza iyo iyo ego inoona iyi mifananidzo. Ivo havasisiri vemuviri kana ivo varipo vaonekwa, asi panzvimbo iyo astral mifananidzo yeyenyama. Ndezvinhu zvemuviri zvinoratidzwa mune yenyika yeasral yeiyo ego, kuti uone iyo yakaderera vibrations yezvinhu zvepanyama yakasimudzwa kune yakakwira mwero wekuzununguka. Chiono cheumwe chinogona kuchinjiswa kubva kuchisikigo kuenda kune chenyeredzi yenyika munzira dzinoverengeka. Izvo zvakanyanya mumuviri nekutarisa kweziso. Iyo etheric kana astral yenyika inopinda, inopinda, uye inopfuura kupfuura yedu yepanyama. Iro ziso rekunyama rakagadzirwa kwazvo zvekuti rinonyoresa chete kutenderera kwakadai kubva pasirese yepasi kana richinonoka kana tichienzaniswa neye efaic kana yeastral world. Ziso repanyama harigone kugamuchira kana kunyoresa etheric vibrations kunze kwekunge rakadzidziswa kana kunze kwekunge rimwe riri rechisiki clairvoyant Pakati pezvose zviri zviviri zvinogoneka kuti mumwe uchinje kutarisa kweziso kubva kune repasirese nyika kune etheric kana astral world. Kana izvi zvaitwa, nhengo kana nhengo dzemuviri zvisati zvambotaurwa dzakabatana neetheric yenyika uye dzinogashira kuyerera kwazviri. Sezvo munhu achiona chinhu chechishuwo chake nokutendeudzira meso ake kuchinhu icho, saka clairvoyant inoona chinhu chiri kure nekuchiva kana kuudzwa kuti ichione. Izvi zvinogona kuita sezvakanaka kune vamwe, asi kushamisika kunopera kana chokwadi chazivikanwa. Nenzira chaiyo yemusikirwo iye anoona clairvoy pakarepo inosimuka kana kumutswa kune nyika yakajeka yenzvimbo dziri kure, kunyange sekudzika kwegungwa kunogona kumutswa kubva pane yake yekupedzisira chiratidzo mumvura kuti aone mumamiriro ekunze, uyezve munzvimbo dzakakwirira. kubva ipapo iye anoona zvinhu achiri kure kure. Mumwe akadzidza kuona clairvoyantly nakareba fundo uye kudzidziswa haafanire kutevera nzira iyi. Anoda chete kufunga nezve nzvimbo uye anoiona kana achida. Chimiro chemafungiro ake chinomubatanidza netambo ye ether inoenderana nepfungwa, kunyange sekumunhu anotendeudza meso ake kuchinhu chaaizoona. Kunzwisisa kwechinhu chakaonekwa kunoenderana nehungwaru hwake. Mumwe anogona kutamisa chiono chake kubva kune chinozivikanwa chinoonekwa kune chisingazivikanwe chisingaonekwe uye anzwisise zvaanoona nemutemo wekufananidza.
Ko munhu wemashiripiti anotarisa mune ramangwana pose paanoda kudaro, uye anoshandisa chikwata chechipiri chekuita here?
A clairvoyant haasi wemashiripiti, uye kunyangwe wemashiripiti angave ari clairvoyant, haasizvo zvakadaro. Mashura ndiye anoziva ruzivo rwemitemo yechisiko, anogara mukuenderana nemirairo iyoyo, uye anotungamirirwa nechomukati nehungwaru hwake hukuru. Vanoshamwaridzana vanosiyana padanho reruzivo uye simba kunyangwe mushandi anosiyana mukunzwisisa uye kugona kubva kune mainjiniya kana wemudenga. Mumwe anogona kunge ari wemashiripiti asina kukudziridza clairvoyance, asi wemashura akagadzira iyi fakisi anoishandisa chete kana achibata nenyaya dzepasirese yenyika. Haazvishandise kumafaro kana kugutsa zvake kana zvekunaka kwevamwe. Hazvina kudikanwa kuti wemashura ashandise clairvoyant fakitori kuti ione mune ramangwana, kunyangwe iye achidaro, kana achishuva, nekuramba akabata pfungwa yake pane imwe nguva mune ramangwana uye achida kuona uye kuziva zviri kuitika nguva iyoyo.
Kana munhu wemashiripiti anogona kuvhara chifukidziro nei vasingaiti zvemashiripiti, mumwe nomumwe kana kuti pamwe pamwe vanobatsirwa neruzivo rwavo nezvezviitiko zvinouya?
Munhu wemashiripiti uyo angatarisa mune ramangwana uye abatsirwe pachako kubva paruzivo rwake aigona kumira kuita zvemashiripiti mune chokwadi. Mashura anofanirwa kushanda mukuenderana nemutemo wepanyama uye kwete kupokana nemasikirwo. Masikirwo anodzivisa kubatsirwa kwemunhu mumwechete kusvika mukukuvadza kwezvese. Kana munhu wemashura, kana chero munhu anoshanda nemasimba akakwirira kune ane munhuwo zvake, anoshandisa masimba iwayo kurwisa vamwe kana kuti iye oga pundutso iye anopikisa mutemo waanofanira kushanda naye, kwete kupesana, uye saka iye anoita mutsotsi kune zvakasikwa uye kuva noudyire kana kuti zvimwe anorasikirwa nemasimba ayo aangave akagadzira; mune zvese izvi anorega kuva svikiro rechokwadi. Anosvikirwa ane kodzero chete kune izvo zvaanoda semunhu uye nezvebasa rake, uye kunzwa kweudyire kana kuda kuwana pfuma kunomuita bofu kumutemo. Iro rakapofumadzwa, iye anobva atadza kunzwisisa uye kunzwisisa iwo mutemo anotonga uye anochengetedza hupenyu, uyo unopfuura kupfuura rufu, uye unobatanidza uye unosungira zvinhu zvese pamwechete mugwara rinobatana kuitira zvakanaka zvevamwe.
Chii chinonzi 'yechitatu ziso' uye rinoita clairvoyant uye wemashura vanozvishandisa?
"Ziso rechitatu" rinotaurwa mune mamwe mabhuku, kunyanya "Chakavanzika Dzidziso," icho chiumbwa chidiki chiri mumusoro wemusoro chinonzi nevezvepanyama chinonzi "pineal gland". Iyo clairvoyant haishandise iyi yechitatu ziso kana pineal gland kuti ione zvinhu zviri kure kana kutarisa mune ramangwana, asi vamwe clairvoyants vakararama hupenyu hwakanaka uye hwakachena hupenyu kungave kwechinguvana kwechipiri vakave neziso rechitatu rakavhurika. Kana izvi zvikaitika zviitiko zvavo zvakatosiyana nechero zvanga zvamboitika. Mashura haawanzo kushandisa pineal gland. Izvo hazvifanirwe kushandisa pineal gland kana yechitatu ziso kuti uone mune ramangwana, nekuti ramangwana nderimwe rematatu ekuparadzanisa nguva, uye nhengo kunze kwepini gland dzinoshandiswa kutarisa mukati, kuona zviripo, kana kutarisa mune ramangwana. Iyo pineal gland kana yechitatu ziso iri pamusoro pezvikamu zvenguva chete, asi ichivanzwisisa vese. Izvo zvine chekuita nekusingaperi.
Ndiani anoshandisa pineal gland, uye chii chinoshandiswa kushandiswa kwayo?
Munhu chete akasimukira, wemashiripiti mukuru kana tenzi, anogona kushandisa iyo "yechitatu ziso" kana pineal gland achida, asi vazhinji vevatsvene, kana varume vakararama hupenyu husina udyire uye vane zvishuvo zvavo zvakasimudzwa, vakawana kuvhurwa "Ziso" munguva dzekusimudzirwa kwavo kukuru. Izvi zvaigona chete kuitwa nenzira iyi yemusikirwo, sekupenya munguva dzisingawanzo dzehupenyu hwavo uye semubairo, iwo iwo mafungiro ezvavakaita uye zviito. Asi varume vakadai vakatadza kuvhura ziso ivo pachavo, nekuti ivo havana kudzidziswa, kana nekuti havana kugona kuchengetedza nguva refu yekudzidziswa kwemuviri nepfungwa zvakafanira kusvika iko. Midzimu, kuziva mitemo yemuviri, nemirairo inodzora pfungwa, uye nekurarama hupenyu hwakachena mutsika, pakupedzisira inodaidza kuti ishandiswe kwenguva refu yakashandiswa mabasa emuviri uye masimba epfungwa, uye pakupedzisira anokwanisa kuvhura ake " chechitatu-ziso, ”iyo pineal gland, nechido chake. Chinhu chekushandiswa kwepinial gland kana "chetatu ziso" kuona hukama sezvazviri pakati pezvisikwa zvese, kuwona chaicho kuburikidza neicho chisiri, kuziva chokwadi, uye kuziva uye kuva mumwe nekusingaperi.
Iro ziso rechitatu kana pineal gland rinotanga sei, uye chii chinoitika pamusana akadaro?
Anongori wemidzimu weakakwira akada kupindura uyu mubvunzo nechokwadi. Pasina kunyepedzera kune chero ruzivo chairwo, isu tinogona nerubatsiro, zvisinei, fungidzira pamusoro pazvo uye kutarisira nzira inoitwa izvi, uye zvakare mhedzisiro. Mumwe anorarama seyakajairika hupenyu hwenyika haugone kuvhura kana kushandisa yake "yechitatu ziso." Ichi chinyama muviri bhiriji riri pakati pemuviri nepfungwa. Simba nehungwaru zvinoshanda kuburikidza naro izambuko pakati peanoperera nekusingaperi. Iye anogara munzvimbo yepedyo anofunga mune akapedzeka uye oita mune akaganhurirwa haangakure mukunzwisisa zvisingaperi iye achiri mupenyu uye anofunga nekuita. Nhanho yekutanga inotorwa kuvhura "ziso rechitatu" kudzora pfungwa, kuchenesa pfungwa, uye kuita muviri. Izvi zvinorova pamidzi yehupenyu, uye inofukidza huwandu hwese hwekuvandudzwa kwevanhu. Mabasa ese anofanirwa kuitwa nokutendeka, zvese zvinosungirwa kuraramira zvakaringana, uye hupenyu hunofanirwa kutungamirwa nemagariro ake eruramisiro. Mumwe anofanirwa kushandura maitiro ekufunga pane baser zvinhu pakufunga kwezvinhu zvepamusoro zvehupenyu, uye kubva ipapo wepamusoro. Masimba ese emuviri anofanirwa kushandurwa kumusoro mukufunga. Zvese zvevakaroorana zvinofanirwa kunge zvapera. Imwe yekurarama ichaita kuti iyo kwenguva yakareba yakashandiswa midzimu yemitezo yemuviri isashande uye isimuke. Muviri uchafarikanywa nehupenyu hutsva, uye hupenyu hutsva uhwu huchakwira kubva mundege kuenda mudenga mumuviri kudzamara zvese zvezvinyorwa zvakanakisa zvemuviri zvinotakura simba kuenda kumusoro uye pakupedzisira, zvingave zvega zvoga, kana nekuedza kuda, ruva rekusingaperi richava kutumbuka: Ziso raMwari, iro "rechitatu", richasvinudzwa. Kupenya kwemazuva ane chiuru hakufanirwe kuenzaniswa nechiedza chechokwadi icho chinozadza uye chakatenderedza muviri uye chinopinda munzvimbo yese. Zvinhu, sezvinhu, zvinopera uye zvinogadziriswa mune izvo zvinomiririra; uye zvese nheyo sekumiririra izvo chaizvo zvinoshandurwa mukudzama kwehukuru. Nguva inonyangarika. Husingaperi ndiripo-huripo. Hunhu hwakarasika muhumwe. Iyo yega yega haina kurasika, asi iyo inowedzera mukati uye inova iyo neiyo yakazara.